पैसा टिक्दैन ? यी वस्तुहरु राख्नुहोस् पर्समा, हुनेछ यस्तो लाभ : – Sadhaiko Khabar
पैसा टिक्दैन ? यी वस्तुहरु राख्नुहोस् पर्समा, हुनेछ यस्तो लाभ :
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २८, २०७८ समय: २२:०५:४५
एजेन्सी / वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा पैसाको अभा’व नहोस् भन्नका लागि यसमा पनि सकारात्मक उ’र्जा पैदा गर्नुपर्छ । तपाइँले पर्समा राख्ने कुराले यसमा पैसाको प्रयाप्तता र अभा’वको वातावरण बन्ने पैदा हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । यहाँ वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा राख्नु पर्ने ७ कुराको चर्चा गरिएको छ । यी कुराहरु पर्समा राख्दा पैसाको अभा’व हुँदैनः
हरेक कुरा पर्समा राख्ने बानी छ भने यस्तो नगर्नुस् । पर्समा अनावश्यक चिजहरु गोलमाल गराए राख्दा यसले नकारा’त्मक उर्जा पैदा हुन्छ र आर्थिक अभा’व हुन सक्छ । यदि तपाइँको पर्समा लक्ष्मीको तस्विर छ भने यसले पनि सकारात्मक उ’र्जा पैदा गर्छ ।
यसले पैसाको अभा’व हुन नदिने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । पर्समा लक्ष्मीको प्रतिमा, गोमती चक्र, चाँदिको सिक्का राख्नु पनि शुभ मानिन्छ । यस्ता वस्तुले पर्समा सकारात्मक उ’र्जा पैदा गर्ने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
मानिसहरुले कसै न कसैलाई गुरु मान्छन् । कतिपयलाई कुनै तर्थस्थलप्रति श्रद्धा हुन्छ । पर्समा गुरुको तस्विर हुनु वा अध्यात्मिक क्षेत्रको तस्विर हुनु सकारात्मक मानिन्छ । यसले तपाइँलाई आर्थिक अभा’व हुन नदिने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।
पर्समा लक्ष्मीलाई चढाइएको वा पुजामा प्रयोग गरिएको चावलका दाना राख्दा पनि सकारात्मक उ’र्जा बन्ने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । यस्तो चामललाई कागजमा पोको पारेर पर्समा राख्नु उचित हुने मानिन्छ ।
पर्समा अ’श्लि’ल तस्विर वा अ’श्लि’ल सामग्री नरा’ख्नुस् । यस्ता कुराले नका’रात्क उ’र्जा बढाउँछ । सके सम्म देवी देवताका तस्विर राख्नुस् पैसाकी देवी लक्ष्मी हुन् । लक्ष्मीको कृपा भएमा पैसा हुने विश्वास गरिन्छ । यसका लागि पर्समा श्रीयन्त्र राख्नु राम्रो हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । विधी पुर्वक पुजिएको श्रीयन्त्र पर्समा राख्दा पैसाको अभा’व हुँदैन ।
यसैगरी कहिले सोच्नु भएको छ सपना मा केके देखिन्छ ? कहिले कहिँ हामी सपनामा निकै नै खुसि हुने गर्दछौ र कहिले निकै दुखि । विपना मा हुने अनुभव र महसुस सपनामा पनि हुन्छ ।
सपनाका फल हरु को बारेमा हामीले अर्को समाचार मा भनिसकेका छौ आज यहाँ सपनामा धन सम्पति पैसा वा अन्य कुनै रत्न देखेमा वा भेटेमा के हुन्छ भन्ने कुरा को बारेमा जानकारी दिदै छौ ।
यदि तपाई ले सपनामा पैसा भेट्नु भयो भने तपाई को जीवन अचा’नक केहि मोड आउने वाला छ भनेर जान्नुहोस । त्यो मोड खस गरि राम्रो पनि हुन सक्छ र नराम्रो पनि । यदि पैसा भेटेर सुरक्षित सँग राख्नु भयो र त्यो तपाई सँग हुदा नै तपाई बिउझिनु भयो भने त्यो राम्रो संकेत हो ।
तपाईको जीवन मा पनि छिट्टै धन वा सफलता हात लाग्ने छ तर यदि सपनामा भेटेको वा देखेको पैसा तपाई सँग छैन वा प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यो सपनाको संकेत अलि कठि’न हुन्छ ।
तपाई लाई सफलता त मिल्छ तर त्यति सजिलो प्राप्त हुदैन तपाई ले त्यसलाई प्राप्त गर्न वा हाँसिल गर्न धेरै नै सं’घर्ष अनि मेहनत गर्नु पर्छ । हुन त सिधा अर्थ मा भन्नु पर्दा मेहनत बिना केहि छैन तर पनि मेहनत को प्रतिफल भने सबै लाई बेग्ला बेग्लै हुन्छ ।
यदि सपनामा मा तपाई ले सुन वा कुनै सिक्का वा रत्न देख्नु भयो भने तपाई को जीवन मा तपाई को आफन्त को सहयोग प्राप्त हुन्छ । मित्र को साथ धेरै नै पाउनु हुन्छ ।
यसलाई मित्रता को प्रतिक मानिन्छ । जीवन मा सम्पति भएर मात्र हुन्छ जो सँग आफ्नो मित्र अनि आफन्त को साथ हुन्छ त्यहि मानिस सम्पन्न र धनि हुन्छ । हामि ले सधै यो कुरा लाई ख्याल गर्नु पर्छ कि एक्लै कुनै पनि काम गर्न क’ठिन छ । त्यसैले साथी र सहयात्री को साथ हुन आवश्यक हुन्छ ।
तर याद राख्नुहोस सपना मा जति कुरा हरु भेट्नु हुन्छ त्यो सबै सपना हरु राम्रो हुन्छ भने हराएको वा गुमा’एको सपना ले तपाई लै निरा’श तुल्याउछ ।